faylka qarsoodiga ah – Nabiga reer Brazil – JucelinoLuz
faylka qarsoodiga ah – Nabiga reer Brazil
Águas de Lindoia, 18 Oktoobar 2021
9, 11 Argagax – Koofurta Aasiya Tsunami – Burburka Katrina, iwm Si sax ah ayaa loo saadaaliyay
Waxaa jira ruux reer Brazil ah oo leh riyo saadaasha mustaqbalka oo ogeysiisa shaqsiga ama dowladda ay khuseyso macluumaad sax ah oo ku saabsan mustaqbalka laga helay riyada, oo xitaa hela jawaab. Wuxuu saadaalinayaa weerarkii argagixiso ee Sebtember 11, 2001 lagu qaaday Dhismaha Xarunta Ganacsiga ee New York, wuxuuna hayaa xaqiiqda ah inuu warqad u diray Madaxweyne Bush (hadda Bush aabihiis) Oktoobar 26, 1989, iyo jawaabta.
Jucelino Nobrega da Luz, oo ah magaca dheer, ayaa warqad u qoray Al Gore oo Mareykan ah May 15, 1988. Wuxuu si sax ah u saadaaliyay in ‘burburka deegaanka adduunka uu dardargelin doono, iyadoo duufaanno iyo sunaami ay ku dhufanayaan Indonesia iyo Mareykanka, dhulgariir ka dhacay Sumatra 2004, iyo Hurricane Katrina oo burburisay koonfurta Maraykanka 2005 ‘.
Jucelino wuxuu qorey buug dhowrista deegaanka, Runta aan habboonayn, wuxuuna saadaaliyay 20 sano ka hor in Gore la siin doono abaalmarinta Nobel Peace Prize sannadkan kaalintii uu ka qaatay ilaalinta deegaanka. Haddii Gore dhab ahaantii ku guuleysto abaalmarinta Nobel Peace Prize- 2007, wuxuu mar kale la yaabi doonaa adduunka sidii nebi tweezers adduunka oo dhan. Wuxuu noqday macallin jaamacadeed isagoo 47 jir ah, yaraantiisiina wuxuu bilaabay inuu wax sii sheego, isagoo riyooyinkii ku arki jiray mustaqbalka. Wuxuu soo dajiyaa kaliya waxsii sheegyo cad oo sax ah, mar walbana qofka hore ayuu u wargeliyaa oo wuxuu helaa jawaab, sidaa darteed wuxuu daryeelayaa saxnaanta iyo hufnaanta wax sii sheegidda laftiisa.
Waqtigii weeraradii argagixiso ee 9/11 ee New York, wuxuu saadaaliyay duulaanka Mareykanka ee Ciraaq ee ka dhashay weerarkan argagaxiso wuxuu warqad u diray wargeyska ‘Miami Herald’ wuxuuna faahfaahin ka bixiyay hoyga Xuseen. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd mid aad looga naxo oo aan lagu soo daabicin wargeyska si looga hortago jahawareerka ka dhex jira dadka Maraykanka ah. Giucerino wuxuu sheegay inuu ka soo daahay inuu helo warqad raali gelin ah oo uu ka helay tifaftiraha guud ee wargeyska.
Marka laga hadlayo waxyeellada ka dhalatay dhulgariirkii Sumatra iyo tsunami, masiibo ayaa lagu wargeliyey Madaxweynaha Maldives 1997. Dhab ahaantii, dhammaadkii 2004, dhulgariir weyn iyo tsunami oo cabirkiisu ahaa 8.9 ayaa ku dhuftay Koonfurta Aasiya. Sannadkii 2003, wuxuu saadaaliyay inay ka sii darayso xaaladda Pope John Paul II wuxuuna ku riyooday riyo gaar ah oo ah in Pope -ku xanuunsaday 1 -dii Febraayo 2005 -tii oo isbitaal la dhigay. Pope -ka ayaa geeriyooday 2 -dii Abriil ee sannadkaas.
Waxaa la sheegay inuu warqad u diray Qasriga Imperial -ka Japan sannadkii 1979 kuna saabsanaa Dhulgariirkii weynaa ee Hanshin iyo Dhacdadii Aum Shinrikyo ee Japan.
Waxa kor u qaadaya saxnaanta iyo kalsoonida riyooyinkiisa hore ee ogaanshaha waa xaqiiqda ah inuusan dayacin hawsha xaqiijinta in ka dib markii uu riyo hore u leeyahay, uu warqad u diro waddanka ama qofka ay khuseyso si loogu yeero feejignaan oo loo helo jawaab.
Nebigani wuxuu awood u leeyahay inuu tamarta meel fog ka bixiyo wuxuuna ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee uga digay mas’uuliyiinta adduunka isbeddelka cimilada ee weyn si loo ilaaliyo aadanaha iyo deegaanka (noolaha).
Qoraal ka socda dhowr wargeys, majallado, raadiyawyo iyo dokumentiyo telefishan oo ku saabsan Oracle.
Hoos waxaa ah xiriir si aad u akhrido buug xiiso leh oo ku saabsan nebigan.
اسرار فائل – برازيل جو پيغمبر
faili la siri – Nabii wa Brazil